सुर्खेत खोर्के देखि गढी सम्मको ४ कि.मी. पदमार्ग निर्माणमा तिब्रता – HostKhabar ::
सुर्खेत खोर्के देखि गढी सम्मको ४ कि.मी. पदमार्ग निर्माणमा तिब्रता
सुर्खेत : आन्तरिक पर्यटन पवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने गरी सुर्खेतकै पुरानो बाटोको रुपमा रहेको सुर्खेत गढी पदमार्ग निर्माण कार्य तिब्र रुपमा सञ्चालन भएको छ ।
वीरेन्द्रनगरको खोर्के देखि वीरेन्द्रनगर १४ सम्मको पुरानो बाटोलाई पदमार्ग बनाउने कार्यको ५० प्रतिशत् काम सम्पन्न भएको हो । पदमार्गको मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र पुर्व मन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल लगायतको टोलीले निर्माणाधीन पदमार्गको अवलोकन गरेका छन् ।
पदमार्गको कामप्रति खुशी व्यक्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले यसका लागि आवश्यक बजेट थप्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले लकडाउनका बेला अन्य ठुला योजनाको काम गर्न नसकेपनि महत्वपूर्ण साना योजनाहरुले गति लिन सक्ने बताए ।
पदमार्ग निर्माण समितिका सचिव अमरबहादुर कार्कीले अहिलेसम्म पदमार्गको काम ५० प्रतिशत सकिएको बताए । असार १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको पदमार्गको कूल लागत ८५ लाख रहेको छ । जसमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६८ लाख र जनश्रमदानबाट १७ लाख लाख व्यहोरिनेछ ।
पहिलो चरणमा ७८० मिटर पदमार्ग निर्माण हुनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणको काम थालिनेछ । दोस्रो चरणको लागि पनि मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
करिव चार किमी लामो पदमार्ग सम्पन्न हुने तीन करोड लाग्ने अनुमान छ । सुर्खेतको पुरानो सदरमुकाम गढीबाट वीरेन्द्रनगर र सुर्खेत दैलेख आउन जानका लागि त्यही बाटो प्रयोग हुने गर्दथ्यो ।
Tags: आन्तरिक पर्यटनमा टेवा
१४ जिल्लाका ४४ केन्द्रमा मतदान रद्द
आज देशैभरि स्थानीय तहको निर्वाचन
काँग्रेस उपसभापति खड्का सुर्खेतमा, चुनावी सभा सम्बोधन गर्ने
वीरेन्द्रनगरमा गठबन्धनलाई राप्रपा भारी, एमालेको चहलपल बढि: कसले मार्ला बाजी ?